SIV 5,29 DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
SIV (System ကိုပြန်ကြားရေး Viewer ကို) 5.29
က MS နှုတ်ကပတ်တော်၌ကိုယ်ပိုင်စာသားမရရှိမှု, အသုံးပြုသူအများစုစာရွက်ပေါ်တွင်စာသားစာမျက်နှာအပြင်အဆင်များနှင့်အနေအထားပေါ် မူတည်. အစီအစဉ်ကိုအဖြစ်စကားလုံးများကို hyphens ကိုအသုံးမပြုပါကအလိုအလျောက်တပြင်လုံးကိုစကားလုံးသယ်ဆောင်။ မကြာခဏ, ဒီရိုးရှင်းစွာပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အနည်းဆုံးအားအခါ, မလိုအပ်ပါ။
pre-လွှဲပြောင်းအမှတ်အသားများချထားရာဌာန၏သို့သော်, အင်တာနက်ကနေ (ကူးယူ) အဲဒီမှာကလူစိမ်းသို့မဟုတ်စာသားစာရွက်စာတမ်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါအမှုများဖြစ်ကြသည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်။ မကြာခဏအခြားတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့စာသားကိုကူးယူခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုကို hyphens သောအခါစာမျက်နှာအပြင်အဆင်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ဖို့ခြား, ပါပဲ။ သူတို့ကိုမဖယ်ရှားလျှင်ပုံမှန်လွှဲပြောင်းလုပ်နိုင်ရန်အတွက်, သင်အစီအစဉ်များ preset ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
2016 အဖြစ် Microsoft ကထဲကနေရုံးအစိတ်အပိုင်းများကို၎င်းတို့၏ယခင်ဗားရှင်းများတွင် - အောက်တွင်ဖော်ပြထားနှုတ်ကပတ်တော်ကို 2010 ခုနှစ်တွင် hyphens ကို turn off ကိုဘယ်လိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်သင်ကလွှဲပြောင်းကိုအလိုအလျောက်စီစဉ်ပေးခဲ့ကြသည်ရသောစာသားရှိသည်, သောပရိုဂရမ်, သမ်မာကမျြး-ohm သို့မဟုတ်မ, ဤကိစ္စတွင်၌အလှနျအရေးကွီးမဟုတျပါဘူးဖြစ်ပါသည်။ ဤအဆိုင်းရန်ကွာစာသားထံမှဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
အဆိုပါ tabs များအနေဖြင့် 1. ပြောင်းလဲမည် "အိမ်" အဆိုပါ tab ကို "Layout".
2. အောက်မှာ "စာမျက်နှာ Setup ကို" စာစောင်ကို "Hyphen" နှင့်၎င်း၏ menu ကိုချဲ့ထွင်။
မှတ်ချက်: အဆိုပါ tab ကိုမှသည်, 2007 - သမ်မာကမျြး 2003 ခုနှစ်တွင် hyphens ကိုဖယ်ရှားရန် "အိမ်" အဆိုပါ tab ကိုသွားပါ "စာမျက်နှာ Layout" နှင့်သက်ဆိုင်ရာကို item ကိုရှာဖွေ "Hyphen".
3. ကို Select လုပ်ပါ "အမှတ်"အလိုအလျောက် hyphens ကိုဖယ်ရှားရန်။
4. ပျောက်ကွယ်သွားဖို့လွှဲပြောင်း, ငါတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်၌နှင့်အင်တာနက်အရင်းအမြစ်များအများစုအတွက်ကိုမြင်လျှင်ရန်အသုံးပြုကြသည်နှင့်တူစာသားကြည့်ရှုမည်။
ပြီးသားအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအခြားလူများရဲ့စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်စာသားကိုအင်တာနက်ကိုကနေကူးယူပြီးစာသားမစာရွက်စာတမ်းသို့ထည့်သွင်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခါ, မမှန်ကန်ကြောင်း Hyphen ၏အထူးသဖြင့်ဘုံပြဿနာဖြစ်ပေါ်သည်။ အလိုအလျောက် alignment ကို၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်ကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်လွှဲပြောင်းအမြဲလိုင်း၏အဆုံးတွင်တည်ရှိပြီးကြသည်မဟုတ်။
တုံးတိုကတည်ထောင်, ငြိမ်မဟုတ်စာသားအတွက်အမှတ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စကားလုံးမှချည်ထားသော, စာသား layout ကိုစတိုင်, စာလုံးသို့မဟုတ် (သင် "မှ" စာသားကိုထည့်သွင်းသည့်အခါမကြာခဏဖြစ်ပျက်သောအရာ) က၎င်း၏အရွယ်အစားပြောင်းလဲပစ်ရန်လုံလောက်သော syllable, သောကွောငျ့ဖွစျသညျဖြစ်ပါသည် ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်ကို manually ၎င်းတို့၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲ hyphens, စာသားတစ်လျှောက်လုံးထက်၎င်း၏ညာဘက်ခြမ်းအပေါ်ဖြန့်ဝေနေကြသည်။ ဒါဟာအောက်ပါတူပေမည်:
ပုံနမူနာကနေပုံရိပ်မှာကကို hyphens လိုင်းများရဲ့အဆုံးမှာမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသထားတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအရာခပ်သိမ်းရာအရပ်သို့လဲကျ, ကမဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးလက်ဖြင့်စာလုံးများကိုဖျက်သောကြောင့်ကိုယ်တိုင်စာသားရဲ့ပုံစံချပေးကိုထိန်းညှိဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဟုတ်ကဲ့, စာသား၏သေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစနှင့်အတူဤလွယ်ကူသောပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်သည်အဘယ်သို့မှားဘာသာပြန်ချက်များကိုနှင့်အတူစာသားစာမျက်နှာများ၏သောင်းချီသို့မဟုတ်ပင်ရာပေါင်းများစွာအတွက်စာရွက်စာတမ်းရှိပါက?
အုပ်စုတစုထဲမှာ 1. "တည်းဖြတ်ခြင်း"အဆိုပါ tab မှာတည်ရှိပြီး "အိမ်" စာနယ်ဇင်းများ "အစားထိုး".
ခလုတ်ကို 2. ကိုနှိပ်ပြီး "ပို"အောက်ခြေလက်ဝဲ, နှင့်တိုးချဲ့ window တွင်တည်ရှိပြီး, select လုပ်ပါ "အထူး".
ပုံပေါ်သောစာရင်းများတွင် 3. , သင်ကစာသားကနေဖယ်ရှားပစ်ချင်သောဇာတ်ကောင်ကို select - "Hyphen" သို့မဟုတ် "non-ခြိုးဖောကျတုံးတို".
4. လယ်ပြင် "အစားထိုး" ဒါဟာအလွတ်ထွက်ခွာရပါမည်။
5. Press က "ဟုအဆိုပါရှာပါ"သင်ရုံစာသားတွင်ဤဇာတ်ကောင်မြင်ချင်လျှင်။ "အစားထိုး" - သင်သည်ထိုသူတို့တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းကိုဖျက်ပစ်ချင်လျှင်, "အားလုံးအစားထိုး"သငျသညျခကျြခငျြးစာသားထဲမှာရှိသမျှကို hyphens ကိုဖယ်ရှားလိုလျှင်။
စစ်ဆေးရေးနှင့်အစားထိုး (ဖယ်ရှားရေး) ၏ပြီးစီးတွင် 6. သင်ကကလစ်နှိပ်ပါရန်လိုအပ်သည့်အတွက်သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်ဖွစျလိမျ့မညျ "Yes" ကို သို့မဟုတ် "အမှတ်"သငျသညျကို hyphens များအတွက် re-ဆန်းစစ်စာသားအားဆက်လက်စီစဉ်ရှိမရှိပေါ်မူတည်ပြီး။
မှတ်ချက်: အချို့ကိစ္စများတွင်, သင်ကစာသားအတွက်လက်စွဲလွှဲပြောင်းကားအဘယ်သို့သောမှန်ကန်သောနိမိတ်အသုံးမပြုစီစဉ်ပေးနေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ် "Hyphen" သို့မဟုတ် "non-ခြိုးဖောကျတုံးတို"သမားရိုးကျအတိုဒက်ရှ်သုံးနေစဉ် “-” သို့မဟုတ်နိမိတ်လက္ခဏာ "အနုတ်"အဆိုပါဂဏန်းခလုတ်၏ထိပ်နှင့်ညာဘက်အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လယ်ပြင် "ကိုရှာပါ" ဒီဇာတ်ကောင်မိတ်ဆက်ပေးရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် “-” ဒါကြောင့်ရှေးခယျြဖို့ဖိနိုင်သည့်ပြီးနောက် quotation သင်္ကေတ, မပါဘဲ "Next ကိုရှာပါ", "အစားထိုး", "အားလုံးအစားထိုး", သင်ပြုချင်ရာပေါ် မူတည်. ။
တကယ်တော့ကန့်, ယခုသင်, 2010 နှုတ်ကပတ်တော်ကို 2003, 2007 ခုနှစ်တွင်လွှဲပြောင်းရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုသိကြ - 2016 နဲ့အလွယ်တကူမဆိုစာသားကိုပြောင်းလဲနှင့်အလုပ်နှင့်စာဖတ်ခြင်းများအတွက်တကယ်သင့်လျော်အောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယို Watch: NHANH NHƯ CHỚP NHÍ - TẬP 29. Trịnh Thăng Bình "dựa hơi" Hari Won chặt chém Trấn Thành (စက်တင်ဘာလ 2019).